10ka Jaamacadood ee ugu sarreeya Kanada oo aan lahayn IELTS 2022
10-ka Jaamacadood ee ugu sareeya Kanada gudaheeda IELTS la'aan
Miyaad wax ka taqaanaa jaamacadaha ku yaal Kanada iyada oo aan lahayn IELTS ama talo bixin Ingiriis ah? Haa ama maya, taas maanta waad baran doontaa.
Waad ogtahay in jaamacadaha ku yaal Kanada, xitaa xitaa Kanada oo keliya, dhammaan waddammada Ingiriisigu u baahan yihiin IELTS ama imtixaanno kale oo Ingiriis ah oo laga qaado ardayda caalamiga ah iyada oo shuruud looga dhigayo gelitaanka. Tan waxaa la dhihi karaa, si kasta oo aad u ogaato, haddii aadan awoodin inaad tan bixiso, weligaa laguma oggolaan doono.
Sikastaba, shuruuddaasi waxaa ugu weyn kaliya ardayda caalamiga ah kuwaas oo aan ka soo jeedin mid ka mid ah dalalkan Ingiriiska ah. Ardayda ka socota wadamada Ingriiska looma baahna inay tan ka hor bixiyaan Ingiriisiga jaamacadaha qaarkood.
Marka laga reebo caqabadan IELTS ee ay la kulmaan ardayda caalamiga ah ee doonaya inay wax ku bartaan Kanada, weli waxaa jira caqabado kale oo leh waxyaabo sida guryaha, khidmadaha wax lagu barto iyo inta kale oo dhan laakiin marwalba waxaa jirta waddo looga baxo.
Ardayda caalamiga ah ee xiiseynaya inay ka shaqeeyaan barnaamijka shahaadada koowaad ee Kanada, waad fiirin kartaa liiska aan ku soo ururiyay 10 sare deeqaha waxbarasho ee ugufiican Kanada.
Sidoo kale, kuwa u socda daraasadaha jaamacadeed, waxaad sidoo kale fiirin kartaa liiska aan u soo diyaariyay tobanka ugu sareeya deeqaha waxbarasho ee ugu dambeeya ee Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah. Waad ka fiirsan kartaa mid kasta oo ka mid ah fursadaha deeqdan waxbarasho, codso oo horay u sii soco.
Kuwa doonaya inay is kafaala qaadaan laakiin kaliya waxay raadinayaan jaamacado ku yaal Kanada iyada oo aan lahayn IELTS, waxaad fiirin kartaa liistadayda 10 sare jaamacadaha ugu raqiisan ardayda caalamiga ah inaad ka heli karto Kanada, markaa, dhexdooda, waad kala sooci kartaa kuwa haysta ka-dhaafitaannada IELTS.
Waxaan qabtay shaqooyin badan oo cilmi baaris ah oo laxiriira wax ka barashada Kanada waxbadanna natiijooyinkeyga waa la daabacay. Inta badan shaqooyinka cilmi baarista ee aan sameeyo waxaa dhiirrigeliya su'aalaha qaar idinka mid ah aad weydiisaan labadaba baraha bulshada iyo halkan.
Waxaan ka ogaaday su'aalahaas in ardayda caalamiga ahi ay dano badan ka leeyihiin Kanada iyo Australia si loo barbardhigo meelaha kale ee waxbarasho-dibedda ah. Tani waxay igu kaliftay cilmi baaris joogto ah oo aan ku sameeyo barashada iyo ka shaqeynta Kanada. Waqti kahor waxaan qoray hage sida loo sameeyo waxbarasho iyo shaqo Kanada taasi waxay kaloo fiirin kartaa.
Kahor intaanan si sax ah u dagin mawduuceena maanta, waxaan rabaa inaan hubiyo inaad marin u leedahay cilmibaarishaygii hore ee ku saabsanaa barashada Kanada.
Waqti ka hor arday caalami ah ayaa ila soo xiriiray lacag aad u fara badan oo uu ku bixiyay arjiga gelitaanka ee Kanada isagoo weydiinaya haddii aan ku hagi karo qaar ka mid ah iskuulada Kanada oo aan ka qaadin ujrada dalabka.
Waxaan isku dayay inaan hubiyo dhowr jaamacadood oo ku yaal Kanada arintaas waxaanan awoodaa inaan la imaado liistada shan jaamacadood oo ku yaal Kanada oo aad dalban karto adigoon dime ku bixin. Cajiib! Weligaa ma ogaan kartid haddii laguu sheegin.
Qaar ka mid ah Jaamacadaha Kanada waxay ka qaadaan khidmadaha dalabka ugu badnaan $ 150 illaa $ 200 tanina waxay dhabar jab xoog leh ku tahay ardayda caalamiga ah maaliyad maaddaama ujuuradan aan la soo celin karin. Mar alla markii mushahar la siiyo, laguuma soo celin karo haddii aad aqbasho iyo haddii kaleba.
Hagaag, halkan waa helitaankeyga Jaamacadaha Kanada oo aan wax lacag ah ka qaadin wax dalab ah. Waad mahadsan kartaa hadhow; laakiin hadda, aan wajahno arrinta halkaan na keentay.
Kahor intaanan diirada saarin sababta aan halkaan u joogno, tani waxay ku saabsan tahay jaamacadaha Kanada oo aan lahayn IELTS.
Jaamacadaha Kanada waxay kaa rabaan inaad gasho imtixaanka IELTS oo qayb ka ah shuruudaha gelitaanka haddii aadan ahayn af Ingiriisiga ku hadla laakiin ay jiraan ka-dhaafitaanno.
Haddii aad heshay waxbarasho rasmi ah oo saddex ama in ka badan oo xiriir ah oo Ingiriisi ah waddankaaga ama meel kasta, waa lagaa dhaafi karaa inaad soo bandhigto natiijada IELTS kahor gelitaanka.
Sidoo kale haddii aad dhameystirtay midkood O'level ama A'level oo af Ingiriis ah ama si ka wanaagsan loo dhigo, oo lagu dhigo Ingiriisiga sidoo kale waa lagaa dhaafi karaa.
Hoos waxaa ku yaal liiska jaamacadaha Kanada oo bixiya ka-dhaafitaanka IELTS.
Jaamacadahani waxay u furan yihiin inay kaa siiyaan ka-dhaafitaanka IELTS, si ka duwan kuwa kale oo badan waad u fiirsan kartaa markaad codsaneysid gelitaanka adigoon helin natiijada IELTS.
Deeqaha sidoo kale waxay u furan yihiin inay wax ka bartaan mid ka mid ah jaamacadaha kor ku xusan si aad sidoo kale u fiirsato oo aad ugu xirnaato deeqaha waxbarasho ee aad wax ku barato jaamacadaha ku yaal Kanada IELTS la'aan si ay kaaga caawiso dhimista kharashyada.
Ogolaanshaha Kanada la'aanteed IELTSwax ka barato Kanada iyada oo aan lahayn IELTSJaamacadaha Kanada gudaheeda IELTS la'aan
Previous Post:Oggolaanshaha Shaqada ee CDI College Montreal | Wax Kasta Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato
Post Next:Koorsooyinka Maareynta Qashinka ee cajiibka ah ee Dubai
Pingback: 25 Deeq waxbarasho oo aan lahayn shuruudaha IELTS Dibadda
Pingback: 13 Sababaha Gaarka ah ee ay waxbarashadu muhiim u tahay
Badmus wuxuu leeyahay,
September 29, 2021 at 3: 20 pm
Fadlan waa maxay dalalka ay ka dhaafi karaan IELTS
Miheret mesfin wuxuu leeyahay,
May 12, 2021 at 8: 19 pm
Aad ayaan u xiiseynayaa ee fadlan ii soo sheeg,
Andrews Osei Kusi wuxuu leeyahay,
October 25, 2020 at 6: 00 pm
November 8, 2020 at 9: am 06
Horey u soco oo codso.
Slimane Benmahmoud wuxuu leeyahay,
August 15, 2019 at 6: 48 pm
Ii ogeysii qoraal kasta oo cusub.
September 5, 2019 at 5: 58 pm
Waad iska diiwaan gelin kartaa cusbooneysiinta boggeena waxaadna hubsan doontaa inaadan ka maqnaan hal cusbooneysiin keliya. Booqo xiriiriyahan si aad isuqorto Guji Halkan Saxeex si aad uhesho wixii ku soo kordha